Hiigsigii Lagu Hungoobay (Maamul Daadajintii Dawladaha Hoose Ee Somaliland):(Hadhwanaagnews) Thursday, January 12, 2017 07:05:35Waxaa jira cadaadis ay saran hay'adaha wax maalgaliya ee aduunku si ay afrika ugu faafiyaan nidaamkooda dimuquraadiga ah islamarkaana waxay
Mid ka mid ah waxyaalaha lagu asteeyo maamul wanaaga waxaa ka mid ah maamul daadajin dawlada dhexe ay u samayso dawladaha hoose. haddii maamul daadajintaasi si fiican ay u shaqayso ay u sahlayso dadwaynaha in adeegii dawladu uu u dhawaado gaar ahaan dadka aan dhaqaalahoodu buurnayn.
Maamul daadajintu (Decentralization) waxay guud ahaan muhiiim u tahay marka aan heer caalami u eegno gaadhista ahdaafta loo dhigay horumarinta aduunka Millenuim development Goals (MDGs) ahdaafta horumarinta waxaa ka mid ah mid sida ay sheegatay UN-tu in la dabar gooyo faqriga iyo in la helo tacliin bilaash ah.
Waxaa jira cadaadis ay saran hay'adaha wax maalgaliya ee aduunku si ay afrika
ugu faafiyaan nidaamkooda dimuquraadiga ah islamarkaana waxay u arkaan in dawlada dhexe oo daadajisa maamulku ay faa’iido u tahay adeega bulshada islamarkaana ay samaynayso maamul wadaag (power Sharing) iyo waliba masuuliyadaha dhinaca maamulka (Administrative responsibility)
Haddii aan eegno waxyaalaha dawlad wanaaga kobciya islamarkaana aan jaleecno kobaca dhaqaalaha inagoo ku eegayna gaadhista ahdaafta heer caalami maamul daadajintu waxay kordhisaa in umadu go’aanka wax ku yeelato iyo in ay adeega u helaan si ka dhow sidii hore.
Somaliland oo ah dal dhaqaalihiisu aanu buurnayn waxaa uu maamul daadajinta dawladaha hoose uu qaatay 2005 maamul daadajinta waxaa loo sameeyey inay kor u qaado isla xisaabtanka iyo dawlad wanaaga iyo in shilin waliba ku baxo halkii loogu talo galay. waxaanay ahayd :
1) In maamul daadajinta dawladaha kordhiso islamarkaana ay wanaajiso adeega dadwaynaha sababtoo ah waxaan dooranay dad ina matalo oo deegaan walba ka soo jeeda.
2) Masuuliyiinta loo doortay maamul daadajinta dawlada hoose waxay ahayd inay noqon karaan qaar umada uga diga musuubooyinka dabiiciga ah marka ay arkaan ifilaalahooda islamarkaana awooda inay caawiyaan dadka iyo duunyaba wixii musiibo Alle ha inaga hayee ka dhaca deegaanka ay masuulka ka yihiin.
3) Maamul daadajinta dawladaha hoose waxay ahayd inay mashaariic horumarineed oo la isku halayn karo islamarkaana qiimahoodu macquul yahay u abuuraan dadka iyagoo waliba ay tahay inay habeeyaan, fuliyaan islamarkaana kormeeraan.
4) Masuuliyiinta loo doortay Maamul daadajinta dawladaha hoose waxay ahayd inay bulshada ku dhiiri galiyaan inay xal u helaan dhibaatada ay la kulmaan islamarkaana ay fursado u abuuraan.
Iyadoo ay sidaas tahay bal hadaba aan is weydiino innaga Somaliland ahaan maxaan ka faa’iidnay maamul daadajinta dawladaha hoose (decentralization of Local Government). Waxaa jirta in maamul daajinta oo hadafkeedu ahaa in dadweynaha loo dhaweeyo adeega islamarkaana la helo xildhabaano la soo doortay oo matala deegaanka waxna ka qabta baahiyaha dadkooda.
Aan su’aal idiin weydiiyo bal aan is barbardhigo maalintii Mayor-ka kaliya ay Hargeysi lahayd iyo maanta oo 25 xidhabaan inoo fadhiyaan caasimada adeegii ma is badalay mise wuu sii cakirmay fili mayo in adeegeenii wax iska badaleen.
Ahdaafta maamul daadajinta dawladaha hoose waxaa ka mid ah inuu isla xisaabtanka iyo dawlada wanaaga sare u qaado. Muwaadin aan ku weydiiyee ma filaysa in dawladaha hoose ee dalka isla xisaabtanku (transparency and accountability) uu sare u kacay ama uu ka jiro?. Waxaan filayaa in manta ay ugu liidato islamarkaana dhulkii danta guud ee loogu talo galay iskuulada, garoonada, Masaajida la la yahay meel ay ku danbeeyeen.
Aan si kale u dhigee xildhaabanadii aan dooranay ma ka shaqeeyaan wixii ahayd inay ka shaqeeya oo ay ka mid tahay inay umada ugu adeegaan si hufan, inay ilaaliyaan hantida qaranka, inay abuuraan fursado dadku uu kaga baxo dhibaatada, inay dadka ka caawiyaan haddii musiibo ku dhacdo.
Hadaba haddii nidaamka maamul daadajinta dawladaha hoose aan lagu guulaysan in lagu gaadho hadafkiisii saw ma aha in laga tashado. Anigu waxaan rumaysanahay maamul daadajinta dawladaha hoose ee Somaliland waxaa innagu khasbay hay’adaha ka shaqeeya horumarinta islamarkaana maalgaliya doorashooyinka ee ikhtiyaar aan leenahy kumaynu samaynin islamarkaana ismaynaan weydiin muxuu faa’iido inoo leeyahay Somaliland ahaan waxaan qaadanay nidaam ay samaysteen wadamo reer galbeed ah islamarkaana leh nidaam adag oo la iskula xisaabtamo kaas oo aan wadankeenu la jaan qaadi karin.
Bal hada eeg aduunyada golahan deegaanka waxaa inta badan gala dad soo shaqeeyey oo khibrad badan mana qaataan mushahar balse waxay leeyihiin fadhiyada lacag lagu qaato. Inagu sidaas ayaan qaadanay hadana xildhabaanadii waxay qaataan mushahar xagay ka xidhmi la’dahay? Haddii aan ku guul daraysanay in maamul daadajintu ina anfacdo oo aan ku guuldaraysanay maxaa inoo diiday inaan iska badalno oo sidii hore ku celino.
Barrigii madaxweynuhu soo magaacabi jiray waa lala xisaabtami karayay mayor-ka bal imika yaa la xisaabtamaya xildhabaan ku leh waa la I soo doortay oo xasaanad ayaa leeyahay hadana wax kharibaya cajab
dawladaha dhexe ayaa la xisaabtami Karta dawladaha hoose. Dawlada dhexe iyada ayaa masuul ka ah dalkoo dhan waanay la xisaabtami kartaa dawladaha hoose waayo iyada ayaa masuuliyadihii ay dadweynaha u haysay qaar ka mid ah ku wareejisay dawladaha hoose balse waxaad moodaa dalkeena in dawladii dhexe dayacday doorkii la xisaabtanka dawladaha hoose. Cida kale ee la xisaabtami kartaa waa bulshada rayidka ah oo is abaabusha lana xisaabtanta taasi dalkeena waa daciif mana jiro dadweyne isku abaabula dantooda si ay iskaga dhiciyaan kuwan qaranka hagar daaminaya.
Waxaan ku soo koobaya waar mar haddii maamul daajintii dawladaha hoose ay uga dartay adeegii dadweynaha, mar haddii aanay inoo horseedina maamul wanaag, mar haddii aanay inoo badbaadin hantidii qaranka, mar haddii ay adagtahay in lala xisaabtamo xildhabaanada aan soo dooranay, mar haddii guud ahaan lagu fashilmay qorshihii iyo hadafkii dawladaha hoose maamul daadajinta loogu sameeyey miyaanay ahayn in aan dib isu qiimayno.
Waxaan uga baaqaya madaxweynaha qaranka inuu dib u eego maamul daadajinta dawlaha hoose islamarkaana uu wax ka qabto madaamo ay masuuliyada koowaad isaga saarantahay. Waxaan ugu baaqaya dadweynaha inay isu abaabulaan siday ula xisaabtami lahaayeen xildhananada ay codka siiyeen madaamo hadafkii laga lahaa lagu guuldaraystay.
Mohamoud Dahir Omar Hargeisa, Somaliland Mobile: 0634423327 Mohamoud Dahir <daahirsl@hotmail.com